WWE RAW Mhedzisiro 29 Ndira 2018, Yekupedzisira Muvhuro Husiku Vakundi vanokunda uye vhidhiyo inoratidzwa - Wwe
WWE RAW Mhedzisiro 29 Ndira 2018, Yekupedzisira Muvhuro Husiku Vakundi vanokunda uye vhidhiyo inoratidzwa
Iyo nyowani logo uye theme, kudzoka kwaJonathan Coachman pane yekutsanangudza uye imwe hombe Elimination Chamber inovaka; Raw akatanga aine chivimbiso chikuru pazvitsitsinho zvehumambo hwakasimba Rumble.
vari kane uye hama dzekuviga
Uye takataura here kekutanga kuratidzira pakati paJohn Cena naFinn Balor kuti vaone kuti ndiani anowana nzvimbo mumutambo weVarume veKubvisa Chamber? Kudonha kwakasviba kweRumble kwakanzwa kunge PPV uye isu zvirokwazvo tanga tisiri kunyunyuta.
Heino mhedzisiro uye zvakakosha:
Stephanie McMahon akavhura iyo show ndokutaura nezve HISTORIC Royal Rumble naRonda Rousey kudzoka-kwakatarisira kudzoka. Kunyanya kukosha akaisa pfungwa pamukadzi wenguva, iyo aiwa yakagadzirira, Asuka.
Asuka akaita nzira yake kumhete kune mukuru pop apo Stephanie akatarisa achizvikudza. McMahon akazivisa kuti Alexa Bliss achamudzivirira Raw Vakadzi zita paElimination Chamber mumutambo wekutanga weWomen EC mutambo. Asuka akacheka pristy promo muJapenese, akatenda vateveri uye akapika kuzove shasha kuWrestleMania vachiita tsika vachinongedzera kuchiratidzo cheWM.
Ivo Bhosi vakavhiringidza mafambiro. Akatora mic uye akataura kuti akagadzirira Asuka manheru ano uye Stephanie haana kutambisa nguva kubhucha kurota kunetsana kwehusiku huno.
hunhu hupi hunoita kuti munhu ave gamba
Izvo zvaive zvisiri zvese sezvo Finn Balor akarongerwa kusangana naJohn Cena kekutanga nguva dzose mumutambo weEC unokodzera. Zvakare, Vanotonga vaigona kukumbira yavo IC zita rematch chirevo vachipesana neMiz uye vaizosangana naye manheru ano.
arikutadza kufarira ini
wwe wakanamatira muSaudi arabia
kuita chikanganiso chimwe chete kakawanda
kuziva sei kana iwe unokwezva
maitiro ekuwedzera kuva mukadzi uye girly
Lana naRusev vakapatsanurwa muhupenyu chaihwo